Wholesale PVC Material for Shrink Packaging & Lable Fanontana Film mpanamboatra sy mpamatsy | INPVC
Fitaovana: Vovon-tsolika résin PVC / Granules Pallets
Density: 1.30-1.33g / cm3
Fanodinana: Blasting koronosy
PVC Shrink Film - Karazana fonosana mihena ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany. Toy ny, hena vaovao, akoho amam-borona, legioma, boky, famehezana rano mineraly ary koa tavoahangy fanafody, zava-pisotro, akora simika isan'andro, fanafody, labiera ary marika sns. Ny PVC dia miorina amin'ny polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride no plastika vokarina fahatelo indrindra eto an-tany. Misy sarimihetsika roa naoty PVC:
Marika pirinty natao tamin'ny kilasy
Mety amin'ny famokarana na fanaovana pirinty ny tanany sy ny marika mihena. Ity sarimihetsika PVC ity dia mazava, henjana ary marevaka. Ny tanjaka lehibe hafa dia ny faritra malama sy ny fotoana lava mitsoka.
Pack ankapobenyKilasy antitra
Sarimihetsika tsara boribory PVC izay tsara ho an'ny fonosana fampiroboroboana, tombokase, ary fanidiana ny fiarovana. Ny hazavan'ny sarimihetsika PVC, ny faharetany ary ny ohatra amin'ny tanjaky ny tombo-kasen'ny hafanana dia mahatonga azy ho sarimihetsika marobe.
Ny akora PVC dia manana mangarahara tsara, fanoherana ny menaka, fananana sakana amin'ny etona rano sy oxygen, ary fanoherana ny harafesina tsara amin'ny zavatra maro toy ny asidra, alkaly ary sira. Amin'ny fampiasana resina polyvinyl chloride sy additives tsy misy poizina, azo amboarina ny fonosana plastika mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly ary mifandray mivantana amin'ny zava-pisotro famonosana, sakafo sy fanafody.
Manana karazana fitaovana ho an'ny sarimihetsika fonosana izahay
Pollets mangarahara granules mamorona endrika potika
Volom-boninkazo Granules Pellets Blueules
Pollets Blue Pellets Granules Partie Grain Form
Former vovoka fotsy voajanahary
Endrika vovoka manga resin
Forma vovoka manga mangamanga
Nandritra ny am-polony taona maro, izahay dia natokana ho an'ny fikarohana, ny fampandrosoana ary
famokarana Compounds PVC. Mba hikirakira ity vokatra ity ao amin'ny singa ampy fitaovana tsara, ny matihanina manam-pahaizana dia mampiasa klôroôlôde klôdezy ambony sy fomba vaovao. Ny vokatra natolotray dia takiana betsaka amin'ny fampiasana indostrian'ny sarimihetsika fonosana.
Forme Pellets mangarahara / manga / manga
Fangaro vovoka fotsy / manga / manga manga voajanahary
● Fitaovana ara-tontolo iainana tsy misy poizina
● akora mafy kristaly
● Mora ny manodina sy manery
● Ny isan-jato mety hitotongana
● Gloss mangarahara avo
● Hery matanjaka, elongation
● Tena tsara amin'ny fanontana milina
● Fitaovana mekanika tena tsara
● Toetra tsara lasitra seam
Film mihemotra PVC ho an'ny fonosana | Sarimihetsika mihemotra PVC ho an'ny fanontana marika | Sarimihetsika famonosana PVC
Teo aloha: Kamban-tanana PVC ho an'ny fantsom-pifandraisana tariby sy tariby
Manaraka: Eko-namana plastika PVC vaovao ho an'ny ankizy Ankizy Boots tsindrona